Isa Resume kuDubai City Kambani uye utsvage basa muAFA
Visa kuenda kuQatar & Money Back Guarantee
Visa kuenda kuUSA & Money Back Guarantee
Visa kuenda kuSaudi Arabia
Visa kune iyo UAE
Upload Resume - Regai Vatori Vanoziva Kuti Muri Kutsvaga Basa Rutsva!
Pakapinda Tumirazve Kukurumidza Kukura Guta Pasi Pano!
Kazhinji kutumira RESUME yako kuDaily City Company iri nyore - kuisa CV yako kuDaily City kana kuti taurirana nesu paChina cheAsApp uye iwe uri maminiti kubva pane yako dream Dubai Jobs. Mukufamba kwenguva basa redu ndeye 100% yakavanzika kune avo vanotsvaka basa uye Recruiters mu Dubai. Isu tinoremekedza humwe hunoga hwega - hupi hupi huno hunoti hukuru hwehutano hwebasa rako remangwana nekambani yedu. Panguva ino regai vatevedzeri vakuru vakuwanei muMabasa edu muArab Blog muUnited Emirates. Vashandi, Vatora, uye Vashandi vari kutsvaga zvinyorwa ikozvino! Pamusoro pe82% yevashandi vanotsvaga dhidhiyo yeCV pasina kunyange kutengesa mabasa avo muGCC. Mutariri we 542,000 anyoresa nekambani yedu uye tiri kukura zuva rimwe nerimwe. Tinoziva kuti ndiani achange achishandira mabasa mu Dubai 2018.
Unoda kuwana a Jobho mu Dubai?
Tarisa Pasi & Upload SHEMA muUAE
Tanga ne Dubai City Company pa Linkedin
$4.99* Hongu, Isu Tinotumira CV Yako!
Shandisa Linkedin Job Hunting For $ 4.99 chete
Upload Resume KuDubai City Kambani uye timu yedu inotumira CV yako chete pa peji rimwechete muna Linkedin Tine chokwadi chokuti wakazviona zvisati zvaitika apo vanhu vanotumira maCV pamapeji edu emakambani !.
Smart Way yebasa rako rekutsvaga! + Gamuchira Nhungamiro Uye Ita Basa Kuvhima neDubai City Kambani (Kuchengeta masevhisi anokosha kuDubai) + Tumira CV yangu kune vese maRenja maneja uye Vatungamiriri muAU pane Imwe peji mune Linkedin + Wedzera rubatsiro!
Isu tine chivimbo kwazvo muchirongwa chedu chekutsvaga basa, zvekuti tinogara tichitarisira chero kutsvaga basa kwatinako! 100% Kunyangwe ye $ 4.99 Tiri kupa CV repost yeCV yako kana ukasawana basa !.
Mushure mekubhadhara kwapera:
System otomata iwe tora iwe kuodha CV. Maitiro aya anotora 30 mazuva ebhizinesi kuti apedze, uye inguva imwe yekubhadhara uye zvinosuwisa kuti isingadzorere muripo.
Nyorera - Paypal
Jobho muDubai mukati me90 Mazuva!
$9.99"Inonyatsogadzirwa for Expats
Takabatsira zviuru zvevanhu sewe!
Upload Resume kuDubai City Company Yedu HR timu inopa simba rako rekutsvaga basa nekuita nyika yepasirose nharaunda Dubai nharaunda kuti utarise CV yako. Shingaira Pedyo neVatengi vedu. Boka redu richashanda pane rako kesi kune vanopfuura 500k vabati uye vanobatsira iwe kuwana basa kuEmirates.
Shandisa zvatiri Special Job Searching System Ne Kuisa Yako Resume. Iwe unogona ikozvino kuedza basa rekutsvaga system 100% Kugutsikana garandi! Kwakanakisisa sarudza expats rutsigiro ruchapihwa kana iwe ukasawana basa mu90 Mazuva!
* Kutanga 90 Mazuva ekutsvaga basa rekutsvaga neDubai City Company uye timu yedu zvakare ichange ichishanda pane yako Nyaya kuti uwane Vashandisi vashanyire CV yako. 610M + Nhengo Inosvika. CV yako ichaonekwa kune HR Directors, VP's, CEO's, Senior Deputy President uye Senior Recruiters muDubai.
Isu tine chokwadi chekuti mungade system yedu! CV yako ichaonekwa kune HR Directors, VP's, CEO's, Senior Deputy President uye Senior Recruiters muDubai.
Kana iwe ukapfuura nepurogiramu uye usingafungi kuti ndiyo inonyanya kukoshesa mari mune basa raunotsvaga. Ipapo iwe unogona kuwana CV repost yeCV yako paLogedin ipapo ipapo, hapana mubvunzo wakabvunzwa. Saka zvakakurega iwe zvachose!
System otomata iwe tora iwe kuodha CV. Maitiro aya anotora 90 mazuva ebhizinesi kuti apedze, uye inguva imwe yekubhadhara uye zvinosuwisa kuti isingadzorere muripo.
Basa rekutsvaga mukati mezuva re60 + Mari Kudzoserwa Guarantee
100% Sistimu yekuwana basa muDubai
Upload Resume ku Dubai City Company ne 60 mazuva rekubhadhara mari. Shingaira Pedyo neVatengi vedu. Chikwata chedu chinotumira CV yako pamapeji makuru ari muPopedin, uye inobatsira iwe kuwana basa kuEmirates.
Shandisa zvatiri Special Job Searching System By Pakutora Resume Yako. Iwe unogonazve kuedza chibereko zvachose RISK-FREE nokuda kwemazuva 60! 100% Kudzosera ichaitwa kana iwe usingawani basa muZ60 Days!
* Tanga 60 Mazuva Maitiro ekutsvaga basa ne Dubai City Company uye timu yedu zvakare ichaiswa CV yako pane Linkedin . CV yako ichaonekwa neVatungamiri veH HR, VP, CEO, Vakuru Vachigaro Vachigaro uye Senior Recruiters muDhaibha.
Tine chokwadi chokuti wakazviona zvisati zvaitika apo vanhu vanotumira maCV pamapeji edu emakambani !.
Kana iwe ukapfuura nepurogiramu uye usingafungi kuti ndiyo inonyanya kukoshesa mari mune basa raunotsvaga. Zvino unogona kuwana 100% Kudzosera pakarepo panzvimbo iyo, hapana mubvunzo wakabvunzwa. Saka zvakakurega iwe zvachose!
Chikwata chedu chinozoisa Mbiri Yako kune vedu vanopfuura 580k Vashandisi uye vatungamiriri ve HR
Vashandi nevatungamiri veHurumende mu Dubai Vanoona CV Yenyu!
⭐ Tsamba yako / Link inogona kuwanikwa kubva pamapeji edu makuru!
⭐ Recruiter Network (80,000 + vadzidzisi)
⭐ Project Managers (24,000 + professionals)
⭐ CIOs / CFOs / CMOs (10,000 + vadzidzisi)
✔Cherechedza zvandinoshandisa "Visa Sponsor Program"
✔Cherechedzai chikumbiro changu cheKunyika Yose
✔Adha CV yangu kuAkland Recruitment Companies
✔Taurai Direct recruiters and Employers on Linkedin
Kana iwe ukasawana basa mu60 Mazuva? Unogona kutumira chikumbiro chekudzosera mari:
refund@dubaicitycompany.com Maitiro aya anotora 3-7 mazuva ebhizinesi kuti apedze, uye mari yacho ichadzoserwa kukadhi rako rebhangi.
Zvino: Isa CV!
Upload Resume ku Dubai Company
Ndapota Shandisai Uye Igovana Neshamwari Dzako!
Upload Resume to Emirates Mubvunzo mukuru: Sei uchifanira kuisa Resume yako ku Dubai City Company ?. Zvichida nokuti isu tiri boka rinotungamirira muguta re Dubai, UAE uye basa redu ndiro rakanakisisa raMabasa muDhair. * Nhamo kuti tishandise chikamu chebasa rekambani yedu iwe unoda kuvandudza konti yako.
Sezvakangoitika, kambani yedu yave ichingobatsira mavhimiti emarudzi ose. Nokuda kwechikonzero ichi, unogona kutumira CV yako yakarongeka, kuungana na Vatungamiri veHR uye Recruiters mu Dubai, GCC neEurope yekuisa. Kambani yedu inopa mazano kune vatorwa vanobva kune dzimwe nyika. Kunyanya timu yedu inopa rubatsiro kune vanotsvaka basa reIndia uye vaPaistani vachitsvaka basa. Basa redu nderokubatanidza iwe nevanonyanya kuverenga nevatungamiri veHR muDhailand, UAE. Dubai City Company, munguva yakareba, ndicho chinhu chinokosha kuwana basa kuMiddle East. Tiri kubatsira vanhu vanoda kuda kutanga basa mu Dubai Companies. Basa redu nderekuisa muvhimi wega wega wega. Sezvakaratidzwa isu tiri kambani inonyanyozivikanwa yeDhaibhi mumasangano ehupfumi. Pamusoro pekutsvaga kwemabasa wese anoda kujoina purogiramu yedu yekutsvaga basa. Bato redu rinopa rubatsiro uye rutsigiro mavari Gulf job search. Pakutora Tumirazve kune kambani yedu uye ona migumisiro.
Kutsvaga mabasa mu Dubai
Munhu wese anoda kuti mutero usingabhadhari mubhadharo. Uye ndichocho chikonzero chikonzero chekuti vakawanda vanoenda kuDaily, UAE. Kuwedzera mikana mumusika weGCC, inoshamisa basa muMiddle East. uye nechokuwedzera chidikanwi chevashandi vakarurama - asi zvino unowana sei basa rakanaka nekambani yakakodzera yekodzero yakanaka? Mhinduro yacho iripo mukuzviisa iwe somunhu akakodzera. Nechinangwa ichi, kambani yedu yakagadzira kuiswa dzokazve chikamu. Nokuda kwechikonzero ichi, unogona kungoshandisa kupedza maminitsi mashomanana kuwedzera CV yako ku Dubai Company. Kazhinji, kutumira CV yako ku Dubai City Company iri nyore uye iri nyore. Zvose zvaunofanirwa kuita ndeza kuzadza basa rekushanda uye wotevera kutevera. Kana kunyange pasina kunonoka kudonha CV yako muchikamu chinokurumidza uye kumirira mhinduro. Basa iri mu Dubai ndiro maminetsi mashomanana kubva pamararamiro ako ehuto. Isu takasimba kwazvo pamusoro pekuvanzika nevanotsvaka basa nevanoshandisa muRussia, UAE uye isu tinewo yakasimba yekuongorora maitiro. Isu tinoremekedza mararamiro ako ega. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, hausi kurasikirwa nechinhu. Chero basa ripi raunosarudza, timu yedu ichakubatsira iwezvi tsvakurudzo yekutsvaga kwemashoko kune expats. Dubai City Company iri kuedza kutarisira basa rinotsvaga mhando dzose dzevanotsvaka basa. Uye zvinhu zvose zvinofungidzirwa patinenge tichiedza kukuisa iwe.
2019 Career ku Dubai uye Abu Dhabi
Abu Dhabi, UAE ndiro guta reUAE. Uye iyi ndiyo iyo inotevera basa rekuita basa riri kuitwa. Kuvimbisa Resume yako inogara yakatarwa mune dhesi yekambani yekushandira ichaita kuti uwane basa nekukurumidza. Iyo nzira iri nyore. Apo Reve yako inowanikwa nyore nyore kune vashanduri mu database, kuwana ruzivo rweporojekiti yako yemabasa mu Dubai, UAE uye mabasa mu Abu Dhabi, UAE inenge iri nyore. Sezvatiri kutaura iye zvino - Vatariri veH HR muDhamasiko Company vari kushingaira kutsvaga kukodzera kwakakodzera uye vakakodzera. pamusoro 82% yevashandi vachitsvaga database yeCV vasina kunyange kutengesa yavo jobs in Dubai. Nokudaro nechiratidzo chimwechete, unogona kusvika kwavari nekushandisa yedu job search services mu Dubai. Vatariri ve542,000 vakanyoreswa nekambani yedu ye Dubai. Panyaya yakanaka uye tiri kukura zuva rimwe nerimwe. Saka haufaniri kunetseka nezvekuwana basa mu Dubai. Somuenzaniso, kambani yedu inoziva kubhadhara mari. Uye tinoziva kuti ndiani achange achishandira mabasa mu Dubai 2018. Usakanganwa Kuti udzore Resume yako kuBayt.com ishamwari yedu CV nzvimbo yebasa. Bayt ndiyo inotungamirira basa site muGulf uye kuMiddle East. Ne Bayt, iwe unogona kuisa Resume, Ita purogiramu, Tsvaga ku Dubai Jobs uye uwane itsva 2018 Jobs Vacancies. Bayt.com kuungana vanotsvaka basa pamwe nevashandi nevatori veUAE. Kambani iyi ine anoshamisa expat mazano uye chimwe chinhu chinokosha pakutsvaga basa ndechedu Dubai Jobs Blog. Nezvo izvi mupfungwa, kambani inotarisawo kuti iite vatariri vatsva mumusika wemabasa yeUAE.
Our Recruitment Partner mu Dubai
Our Partner Bayt.com ndiyo nzvimbo inotungamirira basa kuMiddle East uye Gulf nhasi. Bayt.com job portal, vanomiririra vashandi mune mabasa ose, maindasitiri, uye marudzi munyika. Kunongopedzisira kwesaiti yavo ndeyokuti havashandisi WhatsApp Groups for Recruitment mu Dubai Nenzira dzose, Ishamwari yedu inoshanda nezviuru zvemakambani uye vatungamiri veR HR muDhair. Nehanya zvakasimba kuvakuru vakuru. Saka kana iwe uri muchengeti webasa mukati kuMiddle East pamwe pamwe nekuwana mikana yebasa mumabhizimisi maduku kune mamwe makuru evanhu vakawanda hurumende masangano. Nokudaro, kambani yedu kubatsira vashandi vemabasa kuBaiblo Blog kuti vakwanise kukuvadza nekugadzirira vadzidzisi vanogona uye vabati vemazuva ese kunyange neGoogle Career muDhaibha. Yakatangwa mu2000, Bayt.com yava imwe yezvakavimbwa uye inoremekedzwa neA Dubai Jobs brand munzvimbo yeUnited Emirates. Bayt.com inotarisana mukati Dubai City, United Arab Emirates uko iwe unogona kuisa maRivere ako uye uwane Job muDaily City uye ine mahofisi emahofisi muBud Dhabi, Amman, Beirut, Cairo, Casablanca, Doha, Jeddah, Khobar, Kuwaiti, uye Riyadh.
Kutumira CV yako nekambani yedu
Tumira CV Yako paIndaneti Fortune 500 Companies MuDhorobha City Zvakanaka uye zviri nyore! Join Dubai Jobs Whatsapp Group. Zvechokwadi, Tanga Wakavimbiswa Job Job program ye $ 10? Nyika yekutsvaga basa mu Dubai yakashanduka. Tiri kutobatsira mukati Dubai WhatsApp Group Uri kutarisana nevezvino maitiro here? Nokuva Mumiririri webasa reMuzinda weDaily City Company iwe uri kuzadza basa rekushanda kuti uvandudze mikana yako yega yekuwana basa. Uye Kubvunzurudza nzira yekubudirira. Basa redu rekugadzirisa chirongwa chekuisa chirongwa che100%. Muchidimbu uye iwe uchabatana neboka repamusoro-soro yepamhando yepamusoro yezvakakodzera "vahedheni vekutsvaga" vari kuMiddle East. Iwe unogonawo kuva nerutsigiro rwakakwana kubva kwatiri uye kuva neInoshamisa Expats Advice mu Dubai. * Masimi ose anodiwa uye zvikamu zvekushanda kwemabasa zvinofanira kuzadzikiswa zvizere newe sezvazvinoratidzwa papeji yeCV yekusika pa Dubaicitycompany.com. Mibvunzo Yakawedzerwa yekuzadzwa neVasiri Vagari, pamwe chete Visa ruzivo.
Ongororazve Kuendesa ku Dubai City Company ndicho chinhu Chinobudirira!
Visa kuna Dubai!
$ 5 yekuTora yako mukana kuhwina Visa kuDubai!
Kune chete $ 5 Inenge munhu wese anogona kunyorera iyo Dubai Visa Lottery! Pane izvo zviviri chete zvinodiwa kuti munhu akwanise kuwana UAE Visa Basa: Shandisa iyo Dubai Visa Lottery kuti uwane kunze kwekungobaya mashoma kana iwe uchikwanisa basa reVisa. Chero expatance yekune dzimwe nyika, asiri UAE yenyika, inoda visa rekugara kuti ugare uye ushande muDubai. Nerotari yedu, iwe uchahwina iyo Kugara zvakare / Basa rekuona rinokutendera kuti ushande muDubai!
Kana iwe uchikunda Visa iwe unofanirwa kubhadhara chete $ 5 uye wozonyoresa ako ruzivo.
Zvinhu zvangu zvekutenga